Fanambarana Iraisam-pirenena mombanny ZonOlombelona. Ny 10 d
ⓘ Fanambarana Iraisam-pirenena mombanny ZonOlombelona. Ny 10 desembra 1948 no nolaniana sy nampahafantarinny Fivoriambenny Firenena Mikambana ny Fanambarana Irais ..
ⓘ Fanambarana Iraisam-pirenena mombanny ZonOlombelona
Ny 10 desembra 1948 no nolaniana sy nampahafantarinny Fivoriambenny Firenena Mikambana ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny zonolombelona. Taorianizany vaninandro manan-tantara izany dia nangataka taminireo firenena mpikambana rehetra ny Fivoriambe mba hampiely ity Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny Zonolombelona" ity - Hizara sy hanao azy ho peta-drindrina, hahafahanny tsirairay mamaky sy mandalina ny ventin-kevitra voafono ao anatiny, indrindra any an-tsekoly sy ireo toeram-pampinarana hafa. Ka tsy hanavahana izay sata politika ijoroanny firenena ny fanaovana izany.
Heverina fa ny fankatoavana ny fahamendrehanolombelona sy ny zony mitovy ary tsy azo tohintohinina dia anisanny fototry ny fahafahana, ny rariny ary ny fandriam-pahalemanana eran-tany, Heverina fa ny tsy fahafantarana sy fanaovana tsinontsinona ny zonolombelona dia mitarika aminny fihetsika feno habibiana mampikomy ny fieritreretanny mpiara-belona. Ny fametrahana tontolo vaovao ; hivelaranny olona afaka eo aminny filazana ny hevitra sy ny finoana, ary tsy voagejanny tahotra sy ny fahoriana no hetaheta lehibe indrindra ho anny olombelona, Heverina fa ilaina ny miaro ny zonolombelona aminny fametrahana rafitra tan-dalàna mba tsy hitarika azy hikomy sy hanohitra ny fampihorohoroana sy ny fampijaliana, Heverina fa zava-dehibe ny famporisihana hatrany ny fifandraisana ara-pirahalahiana eo aminny firenen-tsamihafa, Heverina fa ny Fanjakana Mpikambana rehetra dia manaiky hanaja ny zonolombelona sy ny fahafahana fototra, ka miara-miasa aminny Firenena Mikambana izy aminizany, Heverina fa tao anatinny Dina dia nohamafisinny olon-drehetra ao aminny Firenena Mikambana indray ny finoany anireo zo fototry ny olombelona - hanajana ny hasina maha-olombelona, ny fitovian-jonny lehilahy sy ny vehivavy; ary izy rehetra dia maneho ny fahavononany hiasa ho anny fandrosoana sosialy hanatsaratsara kokoa ny fari-piainana ao anatinny fahafahana bebe kokoa. Heverina fa ny Fanjakana mpikambana rehetra dia manaiky hanaja ny zonolombelona sy ny fahafahana fototra, ka hiara-miasa aminny Firenena Mikambana izy aminizany. Heverina fa ny fitoviam-pijery mikasika ireny zo sy fahafahana ireny dia zava-dehibe ho anny fanatanterahana feno izao fiandaniana miharihary izao. Koa dia manambara ny Fivoriambe fa ity Fanambarana Iraisam- Pirenena momba ny ZonOlombelona ity dia toy ny idealy iombonana ka ny firenen-drehetra sy ny vahoaka rehetra no hiara-manatratra azy mba hahatonga ny olona tsirairay sy ny sampan-draharaha samihafa ao aminny fiaraha-monina hiezaka hampandroso ny asa enti-manaja ny zo sy ny fahafahanolombelona aminny alanny fampianarana sy ny fanabeazana ary hiantoka koa ny hampanekena sy hampakatoavana izany aminny alanny fepetra samihafa na nasionaly na iraisam-pirenena ho fampiharana hentitra ny Zonolombelona na eo aminny vahoakanny Fanjakana efa mpikambana na eo aminny mponina any aminireo tany napetraka eo ambany fitantananizy ireny.
2. ANDININY FAHA-2
Samy afaka hizaka ny zo sy ny fahafahana rehetra voalaza ato aminity Fanambarana ny Zonolombelona ity ny tsirairay na inona volon-kodiny na firazanany na vavy na lahy na manao ahoana na manao ahoana firehan-keviny sy fivavahany sy izay fihaviany na laharana sosialy misy azy na inona.
Amboninizany, tsy tokony hahatonga fanavahana mihitsy izay sata politika zakainilay firenena nipoiranny olona na mahaleotena na zanatany na eo ambany fitantananny Firenena Mikambana na mizaka tena izany tany izany.
3. ANDININY FAHA-7
Mitovy ny olon-drehetra eo anatrehanny lalàna ary samy manan-jo harovanizany lalàna izany, indrindra manoloana izay mety ho fanavakavahana na fihantsiana manana endrika fanavakavahana ka mety hanitsakitsaka ity Fanambarana ity.
4. ANDININY FAHA-10
Manan-jo ny olon-drehetra mba hohenoinny Fitsarana am-pahibemaso tsy am-piangarana ny heviny, ka ho fitsarana mahaleo tena tsy miangatra no hametra ny zony sy ny mahamarim-pototra na tsia ny fiampangana atao aminy.
5. ANDININY FAHA-11
1. Izay olona voampanga dia heverina ho mbola tsy manan-tsiny mandra-pivoakanizay didy manameloka azy. Izany didy izany dia havoakanny tribonaly nitsara am-pahibemaso ka nanome ny antoka rehetra fa afaka niaro tena ilay voampanga.
2. Tsy misy olona azo helohina noho ny asa na fanadinoana raha toa izany ka natao taminny fotoana izay tsy mbola ahafantarana fa mahadiso ilay fihetsika na ilay asa araka ny lalàna nasionaly na iraisam-pirenena. Torakizany koa, tsy misy azo saziana mihoatra noho izay sazy voalaza fa ampiharina ao aminny tany misy azy taminny fotoana nanaovany ilay fahadisoana.
6. ANDININY FAHA-12
Tsy misy olona azo itsabahana ny fiainany manokana, ny fianankaviany, ny fonenany, ny taratasy ifandefasany na hitsahina ny voninahiny sy ny lazany. Zonny olona ny harovanny lalàna eo anatrehanny fanitsakitsahana tsy ara-drariny tsy ara-dalàna rehetra.
7. ANDININY FAHA-13
1. Zonny olona rehetra ny mivezivezy an-kalalahana ary ny mifidy izay toerana tiany hipetrahana ao anatinny fanjakana iray.
2. Zonny olon-drehetra koa ny miala amina tany iray, eny fa na dia ny taniny aza, ka miverina aminny tany misy azy.
8. ANDININY FAHA-14
1. Raha misy fanenjehana azy, dia zonny olon-drehetra ny mitady fialokalofana any an-kafa;
2. Io zo io kosa dia tsy azo ampiharina aminny raharahan-keloka tsotra na aminireo asa sy fihetsika mifanohitra aminny foto-pisainana sy zava-kendrenny Firenena Mikambana.
9. ANDININY FAHA-16
1. Rehefa tonga taona ny lehilahy sy ny vehivavy dia manan-jo hivady sy hanorina fianankaviana ka tsy mahasakana izany na fihodirana na zom-pirenena na finoana. Mitovy zo eo anatrehanny fanambadiana, mandritra ny fanambadiana ary aminny faharavanny fanambadiana izy ireo.
2. Tsy misy mariazy azo raiketina raha tsy sitraponireo hivady.
3. Ny fianankaviana no fototra ara-boajanahary iorenanny fiara-hamonina, ka manan-jo harovanny fiaraha-monina sy ny fanjakana.
10. ANDININY FAHA-18
Malalaka aminny heviny sy aminny fivavahana hinoany ary manan-jo hihaino ny feonny fieritreretany ny olon-drehetra. Io zo io dia mamela azy malalaka hiova fivavahana na firehana samihafa. Ny olon-drehetra koa dia manan-jo haneho izany finoany na firehany izany am-pahibemaso na ho anolom-bitsy ; aminny alalanny fampianarana na fanaovana fomba.
11. ANDININY FAHA-19
Ny olon-drehetra dia afaka manana ny heviny ka hilaza izany an-kalalahana. Tsy tokony hampitahorina aminizay fomba fijeriny, ary afaka mikaroka, mandray, mampiely izay vaovao na hevitra hitany aminny alalanireo fitaovam-pifandraisana misy ny olon-drehetra ; tsy hijerena sisin-tany.
12. ANDININY FAHA-20
1. Ny olon-drehetra dia manan-jo malalaka hivory sy hanana fikambanana mitandro ny filaminana.
2. Tsy misy olona azo terena hiditra amina fikambanana anankiray
13. ANDININY FAHA-21
1. Manan-jo handray anjara aminny fitantanana raharaham-bahoaka ao aminny taniny ny olon-drehetra - mivantana na aminny alalanny solontena nofinidy malalaka.
2. Manan-jo hiditra amim-pitoviana aminny raharaham-panjakana ao aminny taniny ny olon-drehetra.
3. Ny sitraponny vahoaka no fototry ny fahefanny fitondram-panjakana. Aminny fifidianana no tokony hanehoany izany sitrapony izany, ka tokony ho marina sy hisy ara-potoana izany fifidianana izany. Handraisanny daholobe anjara ary miafina ny latsa-bato na ara-pomba mitovitovy aminizany ka miantoka ny fahalalahanny fifidianana.
14. ANDININY FAHA-22
Ny olon-drehetra aminny maha-mpikambana ao aminny fiaraha-monina azy dia manan-jo ho voaantoka ara-tsosialy. Fiantohana natao hanajana ny zo ara-toe-karena, sosialy sy ara-kolontsaina izay ilainny fahamendrehanny olona sy ny fivoatranny maha-izy azy aminny alalanny ezaka nasionaly na iraisam-pirenena, araka ny fandaminana sy ny harem-pireneny.
15. ANDININY FAHA-23
1. Manan-jo hanana asa ny olon-drehetra, hifidy izay asa tiany, ka amim-pitoviana sy ara-drariny no hanaovana izany. Manan-jo harovana aminny tsy fanananasa koa izy.
2. Ny olon-drehetra dia manan-jo hahazo karama mitovy aminny asa mitovy, ka tsy asiana fanavakavahana izany.
3. Izay miasa dia manan-jo hahazo karama ara-drariny hahafahany mivelona sy mamelona ny ankohonany araka ny tokony ho izy.
4. Fidiram-bola ampiana fiarovana ara-tsosialy raha misy izany. Manan-jo hanorina na hiditra amina sendika ihany koa ny tsirairay mba hiarovany ny zony.
16. ANDININY FAHA-24
Manan-jo hiala sasatra sy hiala voly ny olon-drehetra. Tokony ho ferana ara-drariny ny fotoam-piasana ary handraisana karama ny fialan-tsasatra aminizany.
17. ANDININY FAHA-25
1. Manan-jo hanana fari-piainana antonony sy ampy ny tsirairay mba hiantoka ny fahasalamany, sy izay rehetra mahasoa azy sy ny ankohonany: sakafo, fitafiana, fonenana, fitsaboana ary kojakoja sosialy ilaina rehetra. Manan-jo ihany koa hahazo fiahiana ara-tsosialy ny tsirairay raha sendra tsy fanananasa, aretina, takaitra, fahanterana na antony hafa tsy niniany ka tsy ahafahany mivelona.
2. Manan-jo hahazo fanampiana sy fanaraha-maso manokana ny reny sy ny zaza. Ny ankizy rehetra, teraka tao anatinny mariazy na ivelany dia manan-jo mitovy aminny fiahiana ara-tsosialy.
18. ANDININY FAHA-26
1. Manan-jo hahazo fanabeazana ny olon-drehetra. Tokony ho maimaimpoana izany, farafaharatsiny any aminny fampianarana fototra. Tsy maintsy atao ny fampianarana ambaratonga voalohany. Ny fampianarana teknika sy ny fanofanana aminny asa kosa dia tokony ho azonny rehetra idirana araka ny fahaizanny tsirairay.
2. Ny fanabeazana dia tokony hikendry ny fivelaranny maha-olona ; hanamafy ny fanajana ny fahafahana sy zo fototra, hampanjaka ny fifandeferana sy ny fifankatiavana eo aminny olon-drehetra sy ny firenen-tsamihafa ; ary hikatsaka izay hampandrosoana ny asanny Firenena Mikambana ho aminny fitandroana ny fandriampahalemana.
3. Ny ray aman-dreny ihany no voalohany manan-jo hifidy izay karazam-panabeazana omena ny zanany.
19. ANDININY FAHA-27
1. Ny olon-drehetra dia manan-jo handray anjara aminireo fihetsiketsehana ara-kolotsaina atao ao aminny faritra misy azy.
2. Mahazo mankafy ny zava-kanto sy mandray anjara aminny fampivelarana ny siansa sy ireo tombo-tsoa aterakizany. Tokony ho arovana ny zonny mpamorona eo aminny lafiny rehetra: voka-pikarohana siantifika, haisoratra, zava-kanto.
20. ANDININY FAHA-28
Manan-jo hivelatra ao anatina rafitra mitandro ny zo sy ny fahafahana fototra voalaza ato anatinity fanambarana ity ny olon-drehetra, eo aminny lafiny sosialy sy iraisam-pirenena.
21. ANDININY FAHA-29
1. Manana adidy aminny fiaraha-monina izay ahafahany mivelatra ny tsirairay.
2. Ny lalàna ihany no mametra ny fizakanny tsirairay ny zony sy ny fahafahany. Izany dia mba hitandroana ny fanajana ny zonny hafa, ny lalàna ara-moraly, ny filaminam-bahoaka ary ny mahasoa ny olon-drehetra ao anatina fiaraha-monina demokratika.
3. Tsy azo ampiharina ireo zo sy fahafahana ireo raha mifanohitra aminny foto-pisainana sy foto-kevitry ny Firenena Mikambana.
22. ANDININY FAHA-30
Ny zava-boalaza rehetra ato anatinity Fanambarana ity dia tsy azonny Fanjakana na vondronolona na olon-tsotra hadika ho manome azy ireo fahefana hanao asa mikendry handrava ny zo sy ny fahafahana voatanisa etsy ambony.
23. Rohy ivelany
en) Page consacrée à la Déclaration universelle des droits de lhomme sur le site de la Bibliothèque audiovisuelle de droit international des Nations Unies
fr) La déclaration universelle des droits de lhomme de 1948 sur le site du ministère français de la justice
fr) La page de la Déclaration universelle des droits de l’homme sur le site de lONU
fr) Courte vidéo sur lhistoire de ladoption de la Déclaration universelle des Droits de lHomme
fr) La page des droits de lhomme sur le site de lONU
Wikipedia: Fanambarana Iraisam-pirenena momban'ny Zon'Olombelona